Laga soo bilaabo 2016, jaamacado badan iyo grandes écoles ayaa bixiyay MOOCs si ay uga taageeraan ardayda dugsiga sare hagitaankooda shaqo. MOOC-yadan waxa loo qaabeeyey si kooxaha waxbarashadu ay u isticmaali karaan nuxurkooda qayb ka mid ah hawlaha dugsiga dhexdiisa.
MOOC-yadani waa aaladaha u adeega kooxaha waxbarida gudahooda qaab dhismeedka saacadaha u go'an hanuuninta oo u ogolaanaya ardayda inay qaataan lahaanshaha maaddooyinka iyo koorsooyinka.
Ujeedada MOOC waa in lagu taageero kooxaha waxbarashada dugsiga sare isticmaalka kaalmada hagida MOOCs, si loogu daro MOOC iyo hawlaha fasalka iyo bixinta jawaab ku habboon muuqaalada iyo filashooyinka ardayda. , iyadoo loo eegayo shakhsiyaynta taageero hagitaan.
Waxay u ogolaataa kuwa aan aqoon u lahayn MOOCs, inay bixiyaan saldhigyada lagama maarmaanka u ah helitaanka MOOCs ee FUN, iyo inay taageeraan isticmaalka MOOC-yada qalab si ay uga caawiyaan hanuuninta.
Ku taageer ardaydaada hanuuninta iyadoo ay ugu wacan tahay MOOCs Diisambar 19, 2021Tranquillus
READ Covid-19: mudada sugitaanka waa laga saaray shaqooyinka joojinta qaarkood
socdaCilmi-nafsiga ee macallimiinta
Koontada tababarka shaqsiyeed: wicitaanada taleefanka, SMS, ka digtoonow isku dayga khiyaanada
Safar ay Brigitte Klinkert ku tagtay waaxda Manche